Misoro yeNhau dzaNhasi, Chishanu, Kubvumbi 02, 2021
Bazi rezvehutano rakazivisa nezuro kuti vanhu zviuru gumi nemazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nevatanhatu, kana kuti 10 796, vakabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira Covid-19, kuchitiwo vamwe zviuru zviviri zvine mazana matanhatu nemakumi matatu nemumwe, 2 631, vachibaiwa nhomba yepiri.
Hurumende inoti vanhu vakwanda munyika vave kuenda kunobaiwa majekiseni ekudzivirira Covid-19 uye inoti zviri kune veruzhinji kutsigira chirongwa chayo chekuti ibaye munhu wese kuti Covid-19 isarambe ichipararira munyika.
Makirisitu anocherechedza zuva rekufa kwaJesu Kristo achitevedzera
mitemo yekuderedza chirwere cheCovid-19 nekurangarira nyaya
dzekumanikidzwa pamwe nehutongi husina kururama pasi rose.
Rimwe sangano revarairidzi reZimbabwe Teachers Association rinoti nhengo dzaro dzichange dzoenda kunodzidzisa kwemazuva matatu chete pasvondo dzichinyunyuta pamusoro pemihoro yadzinoti ishoma zvikuru.
Sangano rinotungamira nhabvu yepamusoro rePremier Soccer League razivisa zuva richatanga mitambo yenhabvu mushure memwedzi gumi nemishanu kusina nhabvu munyika
Muchirongwa cheLiveTalk na8pm tiri kutarisa zororo reEaster pamwe nezviri kuitika munyika mukurwisa dambudziko rechirwere cheCovid-19.